BunnyStudio: Mitadiava talenta matihanina amin'ny feo matihanina ary tanteraho haingana sy haingana ny tetikasanao audio | Martech Zone
Tsy azoko antoka hoe maninona no misy olona manodina ny mikrô findainy ary manao asa mahatsiravina mitantara horonantsary na rakipeo matihanina ho an'ny orinasany. Ny fanampiana feo matihanina sy ny feon-kira dia tsy lafo, tsotra ary mahatalanjona ny talenta any.
Na dia mety halaim-panahy handeha hitady mpandraharaha amin'ny lahatahiry isan-karazany aza ianao, BunnyStudio dia kendrena mivantana amin'ireo orinasa mila fanampiana matihanina amin'ny doka audio, podcasting, tranofiaran-tsarimihetsika, horonan-tsary, mpanatrika rafi-telefaona, na tetikasa audio hafa. Manolotra fidirana amin'ireo mpisehatra amin'ny feo tsy miankina an'arivony amin'ny fiteny maro izay efa voamarina mialoha izy ireo.
Manolotra anao ny fotoana ahafahana manivana sy manontany ny talenta ananan'izy ireo momba ny feo, ny fanoratana, ny horonan-tsary, ny famolavolana, na ny fandikana mihitsy aza ilay tranonkala. Azonao atao ny misafidy ny hamandrika ny talenta hitanao, mandray olona afaka mamadika haingana ilay tetikasa, na koa manao fifaninanana eo anelanelan'ny talenta am-peo vitsivitsy mba hahafahanao misafidy ny mpandresy! Safidio fotsiny ny serivisy, ny fiteny ary ny isan'ny teny ao amin'ny script-nao dia vonona handeha ianao:
Mikaroha santionany amin'ny feo - Mikaroha ny tobim-baovaon'ireo mpilalao sarimihetsika, zahao ny santionany, ary safidio izay mety indrindra amin'ny tetikasanao.
Alefaso ny fehin'ny tetikasanao - Alefaso ny mombamomba ny tetikasanao. Arakaraka ny antsipiriany azonao omena, ny tsara kokoa hahafantaran'izy ireo ny zavatra ilainao.
Raiso ny feonao efa vonona hampiasaina - Manaiky sy misintona ny feonao vonona hampiasaina, voafehy tsara na mangataka fanovana.
Nampiasako ny lampihazo taloha niaraka tamin'ny sanganasa sasany (efa fantatra tamin'ny anarana hoe VoiceBunny) ary niverina androany aho mba haka feo vaovao ho an'ny podcast anay, Martech Zone Interviews. Tao anatin'ny adiny iray dia nisy feon-teny novonoina tanteraka izay ampiasaiko ankehitriny amin'ny fizarana manaraka.
Ity ny intro podcast:
Ity ny podcast outro:
Fanamarihana… ny hafainganam-pandehan'io fiverenana io dia azo inoana satria tetikasa kely tsy dia nisy teny 100… Mino aho fa ny safidy hafainganam-pandehan'izy ireo dia latsaky ny 12 ora amin'ny ankamaroan'ny tetikasa.
Io sehatra io dia ahafahanao manangana biraon'ny talenta fampielezam-peo efa nampiasanao taloha ary maniry hampiasa indray… endri-javatra tsara ho an'ireo orinasa te-hihazona tsy fitoviana amin'ny marika am-peo!
Ny sehatra dia manolotra ihany koa API ho an'ireo orinasa maniry hampiditra ny tetikasa famoahana feo sy feo taorian'ny famokarana ho ao amin'ny vokatra na serivisin'izy ireo. Ary, ho an'ireo fikambanana lehibe, azonao atao ny mifandray amin'i BunnyStudio ho an'ny tetik'asa na serivisy avo lenta izay mitaky endrika manokana, na fanaterana sarotra.
Alefaso izao ny feonao!
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i BunnyStudio.
Tags: tenyfanovana feofamokarana horonam-peosora-peobunnystudiodubbingfeon-tsarimihetsikasarimihetsika feon-tsarimihetsikaFeo amin'ny fiteny marompanatrika rafi-telefaonapodcast intropodcast outropodcastingLahatsoratra-ny famokaranatranscriptionfandikan-tenympilalao sarimihetsikamanenovoicebunnyvoiceover
Maninona ianao no tsy tokony hividy tranokala vaovao intsony